ဒီနေ့တော့ ကြက်သားကော်ပြန်လိပ်ကြော်လေး ကြော်ပါမယ် ၀က်သားအစား ကြက်သားနဲ့ကြော်တာပါ ၀က်သားဆိုရင် မာမာတို့အိမ်မှာ လူမညီပါဘူး မစားတဲ့သူက များတဲ့အတွက် ကြက်သားနဲ့ဘဲကြော်တာပါ။
စိတ်ဝင်စားလို့ကြော်စားကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ ကော်ပြန့်ရွက် ၇ရွက်အတွက် လိုအပ်တာလေးတွေ ပြောပါမယ်။
ကြိတ်စက်ဖြင့် ညက်နေအောင် ကြိတ်ထားသော ကြက်ရင်ပုံသား - 200 g
အနေတော် လှီးထားသော တရုတ်နံနံ - တရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန်အသေး တစ်လုံးစာ
အနေတော် လှီးထားသော ကြက်သွန်မိတ်ပင် - တရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန် တစ်လုံးစာ
ခပ်နုတ်နုတ် လှီးထားသော ကြက်သွန်နီ - တရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန် တစ်လုံးစာ
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်မရှိတစ်ရှိ
ဆီကိုအပူပေးပြီး ဆီပူလာပါက မီးကိုအလယ် အလတ်လောက် လျော့ပြီးမှ ကြက်သားလိပ်ကို ဖျော်ထားသော အပြင်အကာခွံအတွက် စပ်ထားသော အနှစ်ထဲမှာလူးပြီး ဆီအိုးထဲသို့ တစ်လိပ်ခြင်းနှစ်ပေးပြီး ထဲ့ကြော်ပေးပါ
တစ်ဖက်ကျက်ရင် တစ်ဖက်ကို လှန်ပေးပြီး၂ဖက်လုံး ရွှေဝါရောင်သန်းပြီး ကြွတ်ရွလာလျှင် ဆယ်ပြီးဆီစစ်ထားပေးပါ။
ရေ ထမင်းစားဇွန်း ၅ဇွန်း အားလုံးရောပြီး ဖျော်ပေးပါ။
ဒီနေ့ပြုပ်သောက်ဖြစ်တဲ့ ဆန်လှော်ဆန်ပြုပ်လေးပါ ရိုးရိုးဆန်ပြုပ်ထက် ပိုပြီးသောက်လို့ကောင်းသလို ဆန်လှော်မွှေးမွှေးလေးကြောင့် သောက်ရတဲ့ ဆန်လှော်အနံ့လေးကလဲ စွဲမက်စရာပါ။
ရိုးရိုးဆန်ပြုပ်လို ပျစ်ခဲခဲကြီးမနေဘဲ ဆန်စေ့လေးတွေက ပြုပ်ပြီးသည့်တိုင်အောင် ခပ်ကျဲကျဲလေးနဲ့ကျက်တဲ့ ဆန်လှော်ဆန်ပြုပ်လေးပါ။
မာမာတို့တော့ မိသားစုလေးယောက် တစ်နေကုန် ဆာရင်ဆာသလိုသောက်နိုင်ဖို့ ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး၂ဗူးကို လှော်ပြီးပြုပ်ထားတဲ့ နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်
ကြက်သား - အနေတော် တစ်ခြမ်း
ကြက်သားကို အခြမ်းလိုက် ရေဆေးပေးပါ
ရေဆေးထားသောကြက်သားကို အိုးထဲမှာထည့်ပြီး အရသာမှုန့်နှင့် ဆားတို့နှင့်နယ်ကာ ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး ပြုပ်ပေးပါ
ကြက်သွန်များပျော့ပြီး မွှေးလာပါက ကြက်သားများကိုထည့်ပြီး ၅မိနစ်လောက် ဆီသတ်ပေးထားပါ
ပန်းကန်လုံးထဲမှာ ကြက်သားဆန်ပြုပ်ကို မိမိ လိုသလောက် ထဲ့ပေးကာ သောက်ကာနီးမှ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်နှင့် ကြက်သွန်မိတ်ဖြူးပြီး သောက်နိူင်ပါပြီ။
ဒီနေ့ချက်ဖြစ်တဲ့ ငါးဟင်းလေးပါ ငါးမြင်းဟင်းက စားလို့ကောင်းတဲ့ ငါးအမျိုး အစားထဲမှာ ပါပါတယ် ချက်တတ်ဖို့ဘဲလိုပါတယ်။
ငါးအသားက ထူတဲ့အတွက် ဆီသတ်တာ နိုင်ရပါမယ် ဆီသတ်တာ မနိုင်ရင် စားလို့မကောင်းဘဲ ပွစိစိနဲ့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့ ဘယ်အသားဘဲချက်ချက် ဆီကိုကောင်းကောင်း သတ်ပေးသင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ငါးမြင်းက အကြေးခွံမပါဘဲ အရည်ခွံ သက်သက်မို့ မခုတ်မပိုင်းခင် အကောင်လိုက်ကို ဆားသို့မဟုတ် မကျီးသီးမှည့်နဲ့ နယ်ဖတ်ပြီး အရင်ဆေးပေးပါ။
အချွဲများ ကုန်သွားစေသလို အညှီနံ့လဲတော်တော်လေး သက်သာစေပါတယ် ပြီးမှငါးကို လိုသလို ခုတ်ပိုင်းပေးပါ။
အနေတော် တုံးထားသော ငါးမြင်း - 300 g
ဆီသတ်နံ့သင်းလာတာနဲ့ အရသာ နယ်ထားသောငါးကို ထည့်ပြီးဆီသတ်ပါ
ဆီသတ်စဉ် ငရုတ်သီးမတူးစေရန် ငါးအရသာ နယ်ထားသော ဇလုံကို ရေနဲနဲနဲ့ကျင်းပြီးထည့်ပေးပါ
ငါးအသားများ အရောင်ပြောင်းပြီး မာလာတာနဲ့ မကျည်းသီးအနှစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းသာသာနှင့် ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး ဆက်တည်ပေးပါ
ရေခမ်းပြီး ဆီပြန်ကာနီး နံနံပင် သို့မဟုတ် ရှမ်းနံနံ သို့မဟုတ် ကြက်သွန်မိတ်တို့ကို အနေတော်ပိုင်းဖြတ်ကာ အုပ်ပေးပြီး အရသာအတွက် အပေါ့အငံမြည်းကာ လိုတာပြင်ပေးပါ
ဒီနေ့တော့ ပျော့ပျောင်းနွဲ့နှောင်းတဲ့ တို့ဟူးကျိုနည်းလေးပြောချင်ပါတယ် မာမာခပ်ငယ်ငယ်လေးထဲက တို့ဟူးကို ကောင်းကောင်းကျိုတတ်ပါတယ်။
မာမာနဲ့အထက်အောက် မောင်လေးက ငယ်ငယ်လေးထဲက အသားတွေသိပ်စားလေ့မရှိပါဘူး လက်ဖက်သုပ် လက်သုပ်စုံလို အစာတွေနဲ့ဘဲ စားလေ့ရှိပါတယ်။
သူ့အတွက်ညနေစာကို မာမာတို့နေတဲ့လမ်းရဲ့အနောက်ဖက်လမ်းမှာ အသုပ်ရောင်းတဲ့အိမ်ရှိတော့ မာမာကနေ့တိုင်းသွားသွားဝယ်ရပါတယ် သွားဝယ်တိုင်းနောက်နေ့မနက်ရောင်းဖို့အတွက် တို့ဟူးကျိုတာနဲ့ တိုးတတ်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်ထဲက စပ်စပ် စပ်စပ်နေရာတကာ ပါတတ်တဲ့တွက်ကြောင့် တို့ဟူးကျိုတဲ့ကြီးကြီး မစိန်ကြည်ကိုမေးပြီး နောက်ပိုင်းတော့ အိမ်မှာစမ်းပြီး ကျိုဖြစ်ရင်းက ကျိုတတ်သွားခဲ့တာပါ ဒါကြောင့်မို့လို့ မာမာပြင်ဆင်တဲ့ နည်းလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်ရှင်။။
ပဲမှုန့်ချင်တွယ်ရာမှာ မည်သည့်ခွက်နှင့်ဘဲချင်ချင် ပဲမှုန့်တစ်ခွက်ကိုပဲမှုန့်ချင်သည့်ခွက်နှင့် ရေတစ်ခွက်ခွဲနှင့်ရောပေးရင် ရပါပြီ။
တို့ဟူးကျိုမည့် အိုးကို မီးအနေတော်နဲ့အပူပေးလိုက်ပါ
တို့ဟူးကျိုပြီးထဲ့ရန် ဗူးတစ်ခုကို ဆီနှင့်နေရာနှံ့အောင် သုတ်ထားပေးပါ
နာရီဝက်လောက်နေရင် အေးပြီးခဲနေသာ တို့ဟူးတုန်တုန် အိအိလေး ရပါပြီ
သုပ်စားမလား ကြော်စားမလား မိမိနှစ်သက်သလို စားသုံးရန် ပြင်ပေးနိူင်ပါပြီ။
ရံဖန်ရံခါတော့လဲ သတ်သတ်လွတ် ဟင်းအရံလေးတွေ ချက်မိပြန်ပါတယ် မာမာကိုယ်တိုင်က အသားကြီးဘဲ စားရတာ မနှစ်သက်တတ်ပါဘူး ဒါကြောင့်မို့လို့ အသီးအရွက်လိုမျိုး ဟင်းတစ်မယ်တော့နေ့စဉ်ချက်တတ်ပါတယ်။
အသီးအရွက် ဆိုတာမျိုးကလဲ ချက်တတ်မှ စားကောင်းပါတယ် အခုပဲပင်ပေါက်ပဲပြားကြော်လေးကလဲ ကြော်တတ်ရင် တော်တော်အဆင်ပြေပြီး စားလို့ကောင်းပါတယ်။
မကြော်တတ်ရင်တော့ ကြော်နေရင်းက ထွက်လာတဲ့ အရည်တွေကြောင့် ရေစွတ်ပက်နဲ့စားရတာအဆင်မပြေပါဘူး ဒီနေ့တော့ ပဲပင်ပေါက်ပဲပြားလေးကို အဆင်ပြေပြေစားနိုင်ဖို့ ကြော်နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ဇကာနှင့်ရေစစ်ထားသော ပဲပင်ပေါက် - 200 g
ခပ်ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်သွန်နီ - အနေတော် တစ်ခြမ်း
ဒ.်အိုးထဲမှာ ဆီထည့်ပြီး ဆီကို မီးအနေတော်နဲ့အပူပေးပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ နနွင်းမှုန့်ကို ထည့်ပေးပါ
ပဲပြားကို နဲနဲမာအောင် ကြော်ပေးပြီး ဆယ်ထားပါ
ကြက်သွန်နီကို နွမ်းသွားအောင် ကြော်ပေးပြီးမှ ပဲပြားကြော်ကို ပြန်ထဲ့ပြီး မိနစ်ဝက်လောက် ကြော်ပေးပါ
ပဲပင်ပေါက်နဲ့အတူ ဆား အရသာမှုန့်တို့ထဲ့ပြီး နှံ့အောင်မွှေပေးပါ
နှစ်မိနစ် သုံးမိနစ်လောက် ကြော်ပေးပြီးရင် သတ်သတ်လွတ် ပဲပင်ပေါက်ကြော်လေး ရပါပြီ
ထမင်းပူပူလေးနဲ့မိမိနှစ်သက်သလို စားသုံးနိူင်ရန် ပြင်ပေးနိူင်ပါပြီ။
သတ်သတ်လွတ်ကော်ပြန့်ကြော်လေးအတွက် ကြော်နည်းလေး မျှဝေပေးပါတယ်။
နာရီဝက်လောက် ရေစိမ်ပြီး ခပ်ပါးပါးလှီးထားသော Dired flower mushroom. - ၇ပွင့်
ဆီကိုမီးအပူပေးပြီး အရင်ဆုံး ဆီပူလာတာနဲ့ကြက်သွန်ဖြူ ဓါးပြားရိုက်ကို အရင်ကြော်လိုက်ပါ
ကြက်သွန်ဖြူနံ့မွှေးလာတာနဲ့မှိုကိုအရင်ဆုံး တစ်မိနစ်လောက် ထဲ့ကြော်ပါ
ပြီးတာနဲ့မုံလာဥနီထဲ့ မိနစ်ဝက်လောက်ဘဲ ကြော်ပြီးတာနဲ့တရုတ်မုန်ညှင်းကိုထဲ့ပြီး မိနစ်ဝက်လောက်ဘဲကြော်ပါ
ဆား အရသာမှုန့်တို့ထဲ့ပြီးကြက်သွန်မိတ်ကိုထဲ့ပါ ပြီးတာနဲ့ ပဲငံပြာရည်ကိုထဲ့ပြီး မိနစ်ဝက်လောက်ကြော်ပြီးတာနဲ့ မီးပိတ်ပေးပြီး ကြော်ထားတာတွေကို အအေးခံထားပါ
အအေးခံထားစဉ်မှာ ကြော်ထားစဉ်က ထွက်လာသော အရည်များကို အိုးတခြမ်းစောင်းထားပြီး စစ်ပေးထားပါ။
ထောင့်ချွန်းအစနားမှာ အစာကိုအနေတော် ခင်းလိုက်ပါ
အစာခင်းပြီးတာနဲ့ ထောင့်ချွန်းအစကို အစာပေါ်အုပ်ကာ စပြီးလိပ်ပေးပါ
ပထမတစ်ခေါက်လိပ်ပြီး နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ပြီးလိပ်ပေးပါ
ဘေး၂ဖက်ခေါက်ပြီးတာနဲ့ အရင်ဆုံးလိပ်သလို အဆုံးထိ ဆက်တိုက်လိပ်ပေးပြီး ကျန်တဲ့ထိပ်စကို ကော်ရည်ကပ်ပြီး လိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဆီ လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်တစ်လုံးခွဲကို အပူပေးပါ ဆီပူလာတာနဲ့ မီးကိုအနေတော် လျော့လိုက်ပါ
လိပ်ထားသော ကော်ပြန့်လိပ်များကို တစ်လိပ်ချင်း ထဲ့ကြော်ပေးပါ
တစ်ဖက်ကျက်ရင် တစ်ဖက်ကိုလှန်ပြီး ဆက်ကြော်ပေးပါ
ဒီနေ့တော့ ငါးကိုအိုးပူတိုက်ပြီး အကင်လေး လုပ်ဖြစ်ပါတယ် မာမာကတော့ ကိုယ်စားတတ်တဲ့ ငါးဖြစ်တဲ့ ဘာဆာငါးကိုဘဲ သုံးထားပါတယ် အရိုးမပါသလို ငါးအနံ့လဲ မရတဲ့အတွက် စားရတာ တော်တော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။
ငါးကိုအရသာတွေနဲ့နယ်ပြီး တနာရီလောက် နှပ်ထားကာ ကင်မှမို့ အိုးပူတိုက်လို့ကောင်းမဲ့ ဒယ်အိုးမျိုးနဲ့ အိုးပူတိုက်ပါမယ် အိုးပူတိုက်တဲ့ အခါမှာလဲ ရိုးရိုးဆီထက် သံလွင်ဆီသုံးတာ ပိုပြီးကောင်းပါတယ် သံလွင်ဆီရဲ့ အရသာကြောင့် ငါးအိုးပူတိုက် အကင်လေးက အရသာတစ်မျိုးနဲ့ ပိုပြီးထူးစေပါတယ်။
ကင်လို့ကောင်းပြီး မကပ်သော အိုးကို မီးအပူပေးပါ
အိုးပူလာပြီဆိုရင် မီးကိုအနိမ့်ဆုံးကို လျော့ချပေးပြီး သံလွင်ဆီ ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်းလောက်ကို အိုးထဲ ထည့်ပေးပါ
ဆီငွေ့တက်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ အရသာ နယ်ထားသောငါးကို အိုးထဲထည့်ပြီး ကင်ပေးပါ
တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကို အကြာကြီး မထားဘဲ မကြာမကြာ လှည့်ပေးပါ
ဆယ်မိနစ်လောက် အိုးပူတိုက်ပြီး ကင်ပေးပြီးတာနဲ့ သံလွင်ဆီနံ့ မွှေးနေတဲ့ ငါးကင်လေးရပါပြီ
ဒီနေ့တော့ တန်ပူရာမှုန့်နဲ့ ငါးကြော်လေး ကြော်ဖြစ်ပါတယ် ငါးကြီးဘဲသက်သက် စားရတာ ရိုးလာပြီဆိုရင်တော့ အခုလိုလေးကြော်ပြီး စားစေချင်ပါတယ်။
အရသာတစ်မျိုး ဆန်းသလို ၀ါးရတာကြွတ်ကြွတ် ရွရွလေးနဲ့ စားလို့အရမ်းကောင်းပါတယ် မုန့်နှစ်ဖျော်စဉ် ထည့်လိုက်တဲ့ ချင်း ကြက်သွန်ဖြူ အနံ့အရသာတို့ကြောင့် ငါးအနံ့မနှစ်သက်သူတို့ပါ နှစ်သက်ကြမှာပါ ဒါကြောင့်မို့လို့ မာမာပြင်ဆင်တဲ့နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ရေ. - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး ဗူးတစ်ဝက်သာသာ
ပထမဆုံး တန်ပူရာမှုန့် ရေ ချင်း ကြက်သွန်ဖြူတို့ကိုရောပြီး သမအောင် မွှေပေးပါ
ဆီကိုအပူပေးပြီး ဆီပူလာပါက မီးကိုအနေတော်သို့ လျှော့ပေးပါ
မုန့်နှစ်ဖျော်ရည်ထဲသို့ငါးကို အပြားလိုက်နှစ်ပြီး လူးပေးပြီး ဆီပူထဲမှာ ထည့်ကြော်ပေးပါ
တစ်ဖက်ကျက်ရင် တစ်ဖက်ကို လှန်ပေးပြီး နှစ်ဖက်လုံး ရွှေဝါရောင်သန်းပါက ဆယ်ပြီး ဆီစစ်ပေးပါ
ဆီစစ်သွားပါက ချင်း ကြက်သွန်ဖြူနံ့ သင်းသင်းမွှေးနေတဲ့ ငါးတန်ပူရာကြော်လေးကို ရပါပြီ။
အခုရက်ထဲ အကြော်လေးတွေတစ်နေ့တစ်မျိုးကြော်စား ဖြစ်နေပါတယ် နေ့လည်နေ့ခင်း အပျင်းပြေလေးဘဲဖြစ်ဖြစ် ထမင်းစားပြီး အချိုတည်းရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် မနက်စောစော အစာပြေ စားရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ အရမ်းကိုအဆင်ပြေလွန်းတဲ့ အကြော်လေးပါ။
အကြော် ကြော်တဲ့ နေရာမှာ မာမာကတော့ တန်ပူရာမှုန့်နဲ့ ကြော်ထားပြီး မိတ်ဆွေတို့မှာ တန်ပူရာမှုန့် မရှိပါက နှစ်သက်ရာ အကြော်မှုန့်တို့နဲ့ ကြော်ပေးရင် ရပါတယ် ကြော်ရတာ အရမ်းကို လွယ်ပါတယ် စားလို့လဲကောင်းတဲ့အတွက် ကြော်နည်းလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ရခိုင် ငှက်ပျောသီး - ငါးလုံး
တန်ပူရာမှုန့် - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ခွက် တစ်ခွက်
ဇလုံတစ်လုံးထဲမှာ တန်ပူရာမှုန့်ကို ရေအေးနှင့် ဖျော်ထားပေးပါ
ငှက်ပျောသီးကို အခွံနွာပြီး ဖျော်ထားသော မုန့်နှစ်မှာ ငှက်ပျောသီး တစ်ခုလုံးကို လူးပေးပါ
ဒယ်အိုးထဲမှာ ဆီခပ်များများထည့်ပြီး ဆီကိုမီးပြင်းပြင်းနှင့် အပူပေးပါ
ဆီပူလာပါက မီးကိုအနေတော် လျှော့ပေးပြီးမှ မုန့်နှစ်လူးထားသော ငှက်ပျောသီးကို တစ်လုံးခြင်းထဲ့ကြော်ပေးပါ
ငှက်ပျောကြော် တစ်ဖက်ကျက်ရင် တစ်ဖက်ကို လှန်ပေးပြီး နှစ်ဖက်လုံး ရွှေဝါရောင် သန်းလာပါက ဆယ်ပြီးဆီစစ်ပေးပါ
ဆီစစ်သွားပါက အရသာချိုချိုနဲ့ကောင်းလွန်းတဲ့ ငှက်ပျောကြော် မွှေးမွှေးလေး ရပါပြီ။
ဒီနေ့တော့ အရသာထူးကဲတဲ့ ငှက်ပျော ကော်ပြန့်ကြော်လေး ကြော်ပါတယ် ကြွတ်ကြွတ်မွှေးမွှေးလေးမို့လို့ စားလို့အရမ်းကောင်းပါတယ် မာမာကတော့ ကိုယ်စားလို့ကောင်းတိုင်း မာမာ့blog ကိုလာလည်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို သတိတရနဲ့ စားစေချင်မိတာ အမှန်ပါဘဲ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပြင်ရဆင်ရတာလဲလွယ် ကြော်ရတာလဲလွယ်လွန်းတဲ့အတွက် နှစ်သက်မယ်ဆိုရင် ကြော်စားကြည့်ရအောင် ကြော်နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ငှက်ပျောသီး - ငါးလုံး
ကော်ပြန့်ရွက် - ငါးရွက်
ငှက်ပျောသီးကို အခွံခွာပြီး ထက်ဝက်ခြမ်းပေးပါ
ထက်ဝက်ခြမ်းထားသော ငှက်ပြောသီး တစ်လုံးကို ကော်ပြန့်ရွက် အလယ်တည့်တည့်ပေါ်မှာ နှစ်ခုယှဉ်ပြီး တင်ပေးပါ
ကော်ပြန့်ရွက်ရဲ့ အထက်အောက် နှစ်ဖက်ဆီကို ငှက်ပျောသီးပေါ် အုပ်မိအောင် ခေါက်တင်ပေးပါ
ဘေးနှစ်ဖက်ကို တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ထပ်မိအောင် တစ်လွှာစီ ထပ်အုပ်ပေးပါ
ဆီခပ်များများကို ဒယ်အိုးထဲထည့်ပြီး မီးအနေတော်နဲ့အပူပေးပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ ထုတ်ထားသော ငှက်ပျော ကော်ပြန့်ထုတ်ကို ဆီပူပူထဲမှာ ထည့်ကြော်ပေးပါ
ကော်ပြန့်ဖတ်က ငှက်ပျောသီးရဲ့  အစိုဓါတ်ကြောင့် ပေါက်ထွက်သွားနိုင်တဲ့အတွက် တစ်ဖက်မကျက်သေးခင် မလှန်ပေးမိဖို့ သတိထားပါ
တစ်ဖက်ကျက်တော့မှ တစ်ဖက်ကို လှန်ပေးပြီး နှစ်ဖက်လုံး ရွှေဝါရောင်သန်းလာရင် ဆယ်ပြီးဆီစစ်ပေးပါ
ဆီစစ်သွားပါက ကြွတ်ရွချိုမွှေးနေတဲ့ ငှက်ပျော ကော်ပြန့်ကြော်လေးကို အရသာရှိစွာနဲ့ သုံးဆောင်လို့ ရပါပြီ။
ဒီနေ့တော့ ကုန်းဘောင်ကြီးကြော်လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ထမင်းမြိန်ရာဟင်းလေးပါဘဲ အသားတွေကြီး သက်သက်ဆိုတာထက် အသီးအရွက်လေးပါတော့ အာဟာရလဲ ပိုပြီးဖြစ်သလို ဟင်းတစ်မယ်ထဲနဲ့ ထမင်းစားလို့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက် ဟင်းချက်နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ခပ်သေးသေး အတုံးလေးတွေ တုံးထားသောကြက်သား - 150 g
ခပ်သေးသေး အတုံးလေးတွေ တုံးထားသောမုံလာဥနီ - လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး တစ်လုံးစာ
ထက်ခြမ်းခြမ်းထားသော ဘေဘီပြောင်းဖူး - ငါးဖူး
အကြောသင်ထားသော ရွှေပဲသီး - ဆယ်တောင့်
ပထမဆုံး အိုးထဲမှာ ဆီထည့်ပြီး အပူပေးပါ
ဆီပူတာနဲ့ ငရုတ်သီးတောင့်တွေကို မွှေးသွားအောင်ကြော်ပြီး ဆယ်ထားပေးပါ ထိုဆီထဲမှာ ဘဲကြက်သားကို ထဲ့ကြော်ပေးပါ
ကြက်သားကို သုံးမိနစ်လောက် ကြော်ပြီးတာနဲ့ ရေမြုပ်အောင်ထဲ့ပြီး အဖုံးအုပ်ကာ တည်ပေးပါ
ရေခမ်းသွားတာနဲ့ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီနှင့် ချင်းတို့ကို တစ်မိနစ်လောက် ထဲ့မွှေပေးပါ
ပြီးတာနဲ့မုံလာဥနီကိုထဲ့ပြီး တစ်မိနစ်လောက် ထဲ့ကြော်ပါ
ကြက်သွန်မိတ် ဘေဘီပြောင်းဖူး ရွှေပဲသီး ငရုတ်သီးခြောက်ကြော်တို့ထဲ့ပြီးတာနဲ့ ဆား ငံပြာရည် သကြား ပဲငံပြာရည်တို့ကို တစ်ခါထဲ ဆက်တိုက်ထဲ့ပြီး မွှေပေးပါ
ကြက်သွန်များ နွမ်းမသွားအောင် မြန်မြန်ကြော်ပြီး မီးပိတ်ကာ အရသာမြည်းပြီး ပန်းကန်ထဲပြောင်းထဲ့ပေးပါ
ထမင်းပူပူလေးနှင့် အရသာရှိစွာ သုံးဆောင်နိုင်သော ကုန်းဘောင်ကြီးကြော် ရပါပြီ။
အကြော်ဆိုရင် ဘာအကြော်ဘဲဖြစ်ဖြစ် အရမ်းကြိုက်တတ်တဲ့ မာမာတစ်ယောက် ဒီနေ့တော့မြေပဲဇံကြော်လေး ကြော်စားဖြစ်ပါတယ်။
ကြော်ရတာလဲ လွယ်ကူလွန်းတဲ့အတွက် ကြော်စားကြည့်စေချင်ပါတယ် ထမင်းပူပူလေးကို ဆီစမ်းပြီးစားမလား ထမင်းကြမ်းခဲလေးမှာ ဆားလေးပုံပြီး အကြော်တစ်ကိုက် ထမင်းတလုပ် စားမလား အရမ်းကို စားမိန်တဲ့ အကြော်လေးပါ။
မာမာတို့အိမ်မှာ အသားဆိုလက်တွန့်ချင်ကြပေမဲ့ ဒီလိုအကြော်မျိုးဆို ကြော်နေရင်းတောင် ကုန်တတ်တဲ့ သဘောမှာရှိပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ မာမာ မြေပဲ အကြွတ်ကြော်နည်းလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ဆီကို မီးအနေတော်ထားပြီး အပူပေးပါ
ဆီပူလာပါက ရောစပ်ထားသော မုန့်နှစ်ရည်ကို ယောက်ချိုဇွန်း တစ်ဝက်လောက် ခပ်ပြီးထဲ့ပေးပါ
ဆီထဲမှာ မြေပဲဆံများ အကျက်ညီစေရန် ဖြန့်ပြီးခပ်ပါးပါး ထဲ့ပေးပါ
တစ်ဖက်ကျက်ပါက တစ်ဖက်ကို လှန်ပေးပြီး နှစ်ဖက်လုံး ကျက်ပါက ရွှေဝါရောင် သန်းလာလျှင်တယ်ပြီး ဆီစစ်ပေးပါ
ဆီစစ်သွားပါက ကြွတ်ကြွတ်မွှေးမွှေး စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ စားလို့ကောင်းလွန်းတဲ့ မြေပဲဇံကြော်လေး ရပါပြီ။